I-Roses | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Ukuhlukaniswa kwama-roses eklasini nakumaqembu
Esinye sezitshalo ezithandwa kakhulu ezweni lanamuhla "yiNdlovukazi yezimbali" - i-rose. Ukuthola okuvubukulayo kubonisa ukuthi ngisho nasekhulwini le-BC BC. i-er isithombe sakhe saqala ukungena ezintweni zasendlini, ubuciko. Emakhulwini eminyaka okuzala, ukuhlanganiswa, ukuwela kanye nokukhethwa kwemvelo, amaqembu amaningi nezinhlobonhlobo zama roses akhiwe, ezihlanganiswa ngokuvumelana nezici ezihlukahlukene.
Iwayini elimnandi lika-petal: i-recipe eyenziwe ngokwenza
Ngeke kusimangaze noma ubani one-bouquets pink noma ama-flowerbeds, kodwa i-rose ene-lid noma i-stop stopper yinto entsha! Ngokuyinhloko imikhiqizo emibili yenziwe kusuka ku-rose petals: iwayini ne-jam. Lezi yimikhiqizo yokudla ewusizo kakhulu, amavithamini acebile kanye nama-fatty acids abalulekile, ngaphezu kwalokho, noma yikuphi ukukhishwa okuvela ema roses kunomthelela wokulwa nokuvuvukala futhi kukhuthaza ukuphulukiswa kwebhande elimangcwaba lamalungu angaphakathi.
Rose "Black Baccara": incazelo kanye nezici zokulima
Njengoba kuyaziwa, kusenayo i-rose emnyama emhlabeni. Umbala osondelayo we-efihlekile unomkhakha we "Black Baccara". Wabalwa ngo-2004 ngumfuyi waseFrance. Ngokusho kwencazelo, i-rose "Black Baccarat" ihluke kakhulu kwezinye izinhlobo zetiye ze-hybrid. Cwaninga ngokucophelela lokhu kungezwani ngaphambi kokubeka lokhu okuhlala engadini yakho.
Rose "Westerland": incazelo yezici zokunakekela, ukukhiqiza
Rose "Westerland" (Westerland) - enye yezinhlobo ezinhle kunazo zonke phakathi kwama-spray ne-semi-variegated roses. Futhi lokhu akusize, ngoba ngaphezu kokubukeka okuphawulekayo, lesi sitshalo sinokuphikisa okuhle nezifo kanye namaqhwa. Akuyona imbali, kodwa isimangaliso kunoma yimuphi umlimi wensimu! Ngakho-ke, uma unquma ukuyihlwanyela esiqhingini sakho, nakanjani awuphambani nokukhetha.
Rose "Augustus Louise" (Augusta Luise): incazelo ye-varietal nemithetho yokulima
U-Rose "Augusta Louise" ubhekwa njengenye yezinhlobonhlobo ezinhle nezithandwayo ezikhulile manje eziqhingini nasemasimini. Uthando, walinqoba izimbali zakhe eziluhlaza obomvu obubomvu ne-peach shades. Lembali enhle futhi enhle namuhla isetshenziselwa kakhulu umhlobiso kanye nomhlobiso wamaholide, kanye nesipho.
IsiNgisi savuka "iPilgrim": sikhula futhi sinakekelwa
Noma yimaphi ama-roses ayizimbali zobukhosi, izintandokazi zobulili obuhle. Kodwa ipaki ibheka okukhethekile: okugqamile kwe-English pilgrim park roses kusezintweni zabo ezingenakuqhathaniswa nezimo ezithakazelisayo zezimbali. Yiziphi ezinye izici zalezi zimbali, ukuthi zibukeka kanjani nokuthi zinakekelwa kanjani izintombi zasendlini ezingenalutho, funda kulesi sihloko.